MACLUUMAADKA TARANKA BULL-PEI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Bull-Pei Dog iyo Sawirro
Ingiriis Bulldog / Shiinaha Shar-Pei eeyo isku dhafan oo isku dhafan
'Daisy the Bull-Pei oo jira 19 bilood. Waxay miisaankeedu yahay qiyaastii 65-70 rodol oo weli waa ey ey wadnaha ku haysto. Iyadu aad bay u tahay eey 'bulsho' waxayna jeceshahay dadka iyo eeyaha kale. Iyadu weli waa xayawaan weyn waxayna tahay 'Boqoradda' gurigeenna! '
Bull-Pei ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriis Bulldog iyo Shar-pei . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Tani waa Daisy, waa 65 rodolkeenii, Bull-Pei oo jira 19 bilood. Waxay ku qaadatay maalintii inay ilaaliso gurigeenna, cayrsato dabagalo iyo mulaaxyo, oo ay ku ciyooto eyda soo ag maraysa. Imika waxay caloosheeda cuntay iyadoo buuxda iyadoo hawl gabtay! Si adag ayey u ciyaareysaa oo si adag ayey u seexataa. Maaha wax aan caadi ahayn iyada inay na kiciso inta lagu jiro khuurada habeenkii. Waji muxuu ahaa!
Daisy the Bull-Pei oo 10 bilood jir ah— Aabaheed waa cad Ingiriis Bulldog hooyadeedna waa a bunni Shar-pei . Iyadu waa eey aad u saaxiib ah oo jecel dadka, eeyaha iyo xitaa bisadaha. Marna lama kulmo qof shisheeye ah waxayna noqon kartaa madadaalo badan. Waxay wax ka cabtaa qubeyska shimbirta waxayna jeceshahay inay ku laalaato tubbada oo ay daawato iyadoo biyo ka buuxaan. Waxay ahayd mid aad u fudud in guriga la jajabiyo, laakiin waxay ka doorbidaa banaanka. Waxay jeceshahay inay socoto. Waxay leedahay jir aad u muruqsan iyo jaakad jilicsan. Guud ahaan, iyadu waa xayawaan weyn oo tanina waxay umuuqataa inay tahay isku-dhafnaan wanaagsan oo taranka. '
Daisy the Bull-Pei puppy at 7 toddobaad jir (Ingiriis Bulldog / Shar Pei ey isku jira)
Yazmin Bull-Pei eey yar oo 7 toddobaad jir ah— 'Yazmin waa gabar qurux badan oo loo yaqaan lilac brindle Bull-Pei. Waxay haysataa tanno ah laalaab iyo jaakad fiican oo gaaban. Iyadu waa mid ka mid ah cunnooyinka ka imanaya qashinka aan hadda haysto. '
Yazmin ee Bull-Pei eey yar oo 7 toddobaad jir ah oo dhex mushaaxaysa cawska.
eey sanka madow pink jeestay
'Kani waa xubinteenna ugu cusub qoyska, waa Bull-Pei oo la yiraahdo Matilda. Waxay tahay 8 toddobaad sawirradan. Hooyadeed waxay ahayd mid saafi ah Ingiriis Bulldog iyo aabe dhalasho saafi ah Shar pei . Koodhkeedu waa wada madow yahay. Afkeeda gudaheeda waxaa ku yaal midab buluug madow ah oo salka ku haya santuuqa sare iyo qaar ka mid ah baro madow carrabkeeda hoostiisa. Waxaan doonayay Bulldog Ingiriis ah ninkeyguna wuxuu rabay Shar Pei sidaa darteed waxaan ku kulannay dhexda waxaan rajeyneynaa in iyadu aysan lahaan doonin mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee ugu waaweyn labada nooc. In kasta oo markaan u tagayno inaan kusoo dhaweyno xubin kale oo reerkeena ah gurigeyga waxaan aaminsanahay inaan raaci doono mid ka mid ah kuwa sameeya oo raadinaya inuu wanaajiyo taranka laftiisa oo ku dheganaado daahir. Ka dib gadaal iyo gadaalba waxaan ka akhriyay internetka dadka oo isku dhajinaya isku dhafka labada nooc. Dabcan u huritaan saafi ah iyo tababar habboon oo waqti leh ayaa sheegi doona. Waxaan aaminsanahay inaan siino fursada ugufiican nolosha iyo inaan sidaas yeelno cunto tayo sare leh oo wuxuu leeyahay dhakhtar xoolaha ah oo dhawr dariiq oo wadada ka hooseeya ah. Waxaan aaminsanahay haddii noocoodu yahay nooc isku dhafan ama mid saafi ah waa inaad markasta iyaga siisaa fursadda ugu fiican nolosha. In kasta oo haddii qof kastaa sidaa u fikiro aaney eey jiri lahayn hoyga sidoo kale. Sidoo kale ka taxaddar waxa aad naftaada u geleyso isku darka labadan taranka, waxaa laga yaabaa inaad ku dhammaato an alfa iyo hal cunug oo aad u madax adag. Iyadoo tababar habboon waxaana rajeynayaa inay ka heli doonto booskeeda gurigeenna oo ay ku raaxeysan doonto nolosheeda. Waxaan daawanayay Cesar Millan aad u badan waxaanan adeegsanayaa farsamooyinkiisa badan si aan tababarka uga caawiyo. '
Matilda eey yar oo Bull-Pei oo yar yar ah oo 8 toddobaad jir ah oo ay ku ciyaareyso tooydeeda.
Matilda madow ee Bull-Pei eey yar oo jirta 4 bilood— 'Matilda waa Bull-Pei, hooyadeed waxay ahayd Bulldog Ingiriis saafi ah aabeheedna wuxuu ahaa Shar Pei saafi ah. Waxaan guriga la nimid gabdhaheena yar markii ay 8 toddobaad jirtay. Iyadu way la yaab badan tahay carruurta da 'kasta leh waxayna jeceshahay inay la ciyaaraan eeyo nooc kasta leh Bisadaha dhanka kale maahan wax aad u tiro badan oo ay u ooyso iyaduna aad ayey u xiiseyneysaa laakiin ma jecla sida ay ugu khuurto dhankooda lol. Hal shay ayaa hubaal ah, markaan abid soo kaco saqda dhexe ee habeenka waxaad hubsan kartaa inaad kaheli doontid goobtayda markaan soo noqdo !!! Waxay had iyo jeer isku dayeysaa inay xado barteyda habeenkii !!! '
adhijir Jarmal qasan beagle
Matilda eeyaha yar ee Bull-Pei ee jira 4 bilood
'Tani waa haweeney 4 toddobaad jir ah oo loo yaqaan' Bull-Pei puppy 'oo ku taal Alabama. Waa nashqadeeyaha naqshadeeye ee Shiinaha Shar Pei iyo Bulldog Ingiriis ah. Iyagu waa kuwo dhisan, oo qoorta qaro weyn leh, muruqyo iyo saddex-xagal qaab leh waana kuwo firfircoon oo firfircoon saaxiibbadood daacadna ah. Waxay leeyihiin laalaab badan iyo maqaar dabacsan laakiin ma aha dhammaan arrimaha caafimaadka ee bulldog Ingiriisi saafi ah.
JJ the Bull-Pei eey 5 asbuuc jir ah— 'JJ waa shukulaato / buluug fawn Bull-Pei. Bull-Pei waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriis Bulldog iyo Shiinaha Shar Pei. Waa xayawaan adag, xiiso leh oo jecel xayawaan daacad ah. Waan jeclahay duuduubkooda!
JJ eey Bull-Pei oo jirta 5 toddobaad
Qashin yar oo ah 'Bull-Pei puppy' oo ka yimid Wrinkle Bluff Kennels
cocker spaniel poodle mix eey
Sonkor Mini Bull-Pei sida eey markay jiraan 3 usbuuc— 'Sonkorta waa Bulldog Ingiriis ah oo lagu qasay Mini Shar-Pei.'
Sonkor ku sii Mini Bull-Pei sida eey markay tahay 3 toddobaad
madow shih tzu chihuahua mix
eyda gampr ee armenia iibka ah
sawirada Pyrenees weyn
stern bern german adhijir